Xaflad weyn oo lagu xusayay 1 Luuliyo oo ka dhacday Villa Somalia. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Xaflad weyn oo lagu xusayay 1 Luuliyo oo ka dhacday Villa Somalia. Munaasabadaani loogu dabaal dagayay 52 sano guuradii kasoo wareegatay markii gobolada Koofureed ee Soomaaliya ay ka xuroobeen gumaystihii Talyaaniga ayna midoobeen Waqooyiga iyo Koofurta dalka ayaa waxa ay ka dhacday Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho.
Madax ka tirsan dowladda oo uu ka mid yahay Madaxweynaha iyo qeybo kale oo ka mid ah bulshada sida raga, haweenka oo leh Odayaal iyo dhalinyaro, fanaaniinta kooxaha Waabari iyo Danan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo sugayay amaanka ayaa goobjoog ka ahaa Xafladda oo loo soo agaasimay si heer sare ah.
Saacadu marka ay soo gaartay 12-ka habeenimo ee saqda dhexe ayaa waxaa Calanka Soomaaliya laga suray fagaare ku yaalla bartamaha Madaxtooyada, iyadoo dadka ay ku jireen safaf dhaadheer.
Calan saarka kadib ayaa waxa ay soo bandhigeen fanaaniinta heeso aan laheyn caajis iyo daal oo qiira galiyay dadka kuwaasi oo fadhiga ka kiciyay Madaxda iyo shacabka oo ciyaaro lala dhacay goobta kusoo bandhigay.
Yusra Jaamac Shaacuur oo ah haweeney 82 jir ah oo ka mid ahayd Ururkii SYL ee usoo halgamay Xornimada ayaa waxa ay sheegtay in hadii aysan midoobin Soomaalida oo aysan wada qaadan hal Calan in mar kale loo gacan galayo gumaystaha oo cagta la marin doono Soomaalida.
Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay gabagabadii munaasabada ayaa waxa uu sheegay in halgan badan loo soo maray xornimada ugu dambeyntiina la guulaysto, waxaana sidaasi si la mid ah uu sheegay in loo baahan yahay in laga gudbo khilaafka oo la midoobo si loo gaaro dowladnimo iyo midnimo.
Munaasabada 1 Luuliyo ee lagu qabtay Madaxtooyada ayaa waxa ay kusoo gabagabowday jawi heer sare ah, iyadoo lagu kala tagay saacadu marka ay ahayd 3:00 habeenimo